Accueil Ny Mpitandrina Hafatra Synôdaly Noely
Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo.
« Mifalia mandrakariva ; mivavaha lalandava ; misaora an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak’Andriamanitra hataonareo tafaray amin’i Kristy Jesoa. »(I Tesalonisianina 5, 16-18 -DIEM-). Azontsika raisina tsara ho antsika vahoaka kristiana ato anatin’ny FPMA koa izany hafatry ny apostoly ankehitriny, amin’izao Noely sy faran’ny taona ary ho amin’ny fiatrehana ny taona vaovao izao. Fa ataontsika ahoana tokoa moa ny tsy hisaotra an’Andriamanitra izay nomba antsika ka nahafahantsika nanatanteraka an’ireo asa samihafa nalahatra mba hotontosaintsika tamin’ity taona 2004 ity. Vita tamim-pilaminana sy nahafahana nandray fanapahan-kevitra ho voarakitry ny tantara ny Synoda Lehibe faha-30 natao tany Nancy. Natsangantsika ho teny faneva mandra-pahatonga ny Synoda Lehibe manaraka indray ny hafatry ny apostoly hoe : « Koa manahafa an’Andriamanitra ianareo, satria zanaka lalainy. Ny fitiavana no aoka hanenika ny fitondrantenanareo, tahaka ny nitiavan’i Kristy antsika sy nanolorany tena tamin’Andriamanitra toy ny fanatitra sy sorona manitra mamerovero ho fanasoavana antsika »(Efesiana 5, 1-2 -DIEM-).
Fa tsy mibanjina ny ho avy sahady koa isika, maka bahana mba hahatanterahantsika ireo andraikitra lehibe maro, fanamby noraisintsika. Matokia fa « Miasa ao anatinareo hatrany Andriamanitra hahatonga anareo hikasa sy hanatanteraka izay mifanaraka amin’ny safidim-pony » (Filipianina 2, 17 -DIEM-). Entintsika amim-bavaka ireo fiaraha-mivavaka vao noraisina ho tafo vaovao, sy ireo fiaraha-mivavaka miandry ny handraisana azy ireo ho tafo. Ivavahantsika koa ny hahatanteraka ny fandraisana antsika ho mpikambana feno ao amin’ny Fédération Protestante de France rehefa amin’ny fivoriambeny hatao amin’ny volana marsa taon’itsy. Fiangonana miorina ara-dalàna eo anatrehan’ny lalàna isika, ka sady manaraka ny tokony ho izy mifanahaka amin’ireo fiangonana protestanta frantsay rahavavintsika, no miezaka koa hanaja ny zava-takian’ny lalàna manan-kery. Arahabaintsika ny sampana Vehivavy vao nankatoavin’ny Synoda Lehibe farany teo ny fijoroany ato anatin’ny FPMA eo amin’ny sehatra nasionaly. Misy asa miandry antsika amin’izao taona vaovao izao araka ny fandaharan’asa efa natao. Ezaho ary aoka hataonareo ho zava-dehibe tokoa ny fiombonantsika, « Ka mba hiray feo ianareo hiara-manome voninahitra an’Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika »(Romanina 15, 6 -DIEM-).
Dia mirary Krismasy sambatra sy Taombaovao feno fifaliana ho anareo rehetra izahay.
Ny Filoha Synodaly, Filohan’ny FPMA
Jean A. RAVALITERA, Mpitandrina